Akukho okusiphoqa ukuthi sikhokhe u-R1.125bn - Absa | isiZulu
Akukho okusiphoqa ukuthi sikhokhe u-R1.125bn - Absa
UMvikeli woMphakathi uthi ibhange lakwa-Absa kumele liyikhokhe imali
Lithi aliqondile abakwaZuma ibhange ‘elisabise’ ngokuvala i-account kankosikazi kaMengameli
Cape Town – U-Absa awuphoqolekile ukuthi ukokhele noma ngabe yini uhulumeni waseNingizimu Afrika, leli bhange lisho kanjalo ngoMsombuluko.
Beliphendula ngombiko woMvikeli woMphakathi, uBusisiwe Mkhwebane, nalapho ethe ukutakulwa ngo-R1.125bn kweBankorp yiSouth African Reserve Bank (SARB) kwenziwa ngokungemthetho futhi u-Absa kumele ayibuyise le mali.
Lokhu kumayelana nokutakulwa kweBankorp yiSARB phakathi konyaka ka-1985 kanye no-1995. U-Absa wathenga iBankorp ngo-Ephreli wango-1992.
“Asikayitholi ikhophi yombiko futhi sinxusa ngokushesha ihhovisi lomvikeli womphakathi ukuthi liwuthumele kuthina. Uma sesiwufundile sizobheka izindlela zomthetho okubalwa nokucela ukubuyekezwa yiNkantolo eNkulu,” u-Absa ubeke kanjalo esitatimendeni.
OLUNYE UDABA: Uhulumeni akayeke ukusebenzisana no-Absa - ANCWL
“U-Absa wahlangabezana nokwakumele ukwenze mayelana nemalimboleko okwakumele ayithole kwi-SA Reserve Bank ngaphambi kuka-Okthoba 1995. Kuwuhlangothi lwethu oluqinile ukuthi akukho okusiphoqayo ukuthi sikhokhe noma ngabe yini kuhulumeni waseNingizimu Afrika.”
Inkampani engabanikazi ba-Absa, iBarclays Africa [JSE:BGA] yehlelwe yintengo yamasheya yafinyelela ku-2.32% ngoMsombuluko ngo-14:51, nalapho isheya ngalinye lale nkampani bese lidayisa u-R142.20 kanti ibisilahlekelwe ngu-R15.8m ngokobukhulu bayo ezimakethe (market value).
UMkhwebane uthe ukuphenywa okubili obekwenziwa kulolu daba kuthole ukuthi usizo lwezezimali olwanikwa iBankorp Limited/ABSA Bank lwalungaqondile.
Uthole ukuthi ngokunikezela ngosizo lwezimali kuBankorp, i-SARB yahluleka ukuhambisana nomthetho iSouth African Reserve Bank Act.
Ngaphezu kwalokho, uthole ukuthi uMnyango wezeziMali ngokwalo mthetho wawunomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi i-SARB iyahambisana nalo mthetho, nokuyinto athi wahluleka ukuyenza.